I-Cannabis Amafutha / I-CBD Nanoemulsion yi-Ultrasonics - Hielscher Ultrasound Technology
Ungakhiqiza i-nanoemulsion ye-CBD ku-batch noma kwimodi eqhubekayo usebenzisa umshini we-emulsization we-ultrasonic. Ama-Hielscher ama-homogenizer e-Hielscher angama-emulsifiers anamandla ukukhiqiza nano-emulsions ye-CBD ezinzile. Ukukhiqizwa kwe-ultrasonic kwama-cannabis uwoyela emulsions (o / w) inqubo elula futhi esheshayo, ekhombisa ngemiphumela emihle.
I-cannabis Amafutha noma i-CBD Emulsion
Ama-emulsions wamafutha weCannabis ukumiswa kwamacanoni osayizi we-micron noma ama-nano-size cannabino-, hemp-, THC- noma imikhiqizo esekwe ku-CBD enjenge-tinctures, amaphilisi, ama-lotion, kanye nama-cartridge we-e-ugwayi we-e-ugwayi. AmaCannabinoids anjenge-THC, i-CBD njll. Yi-lipophilic (= hydrophobic). Ngakho-ke badinga ukugunda okukhulu ukusabalalisa i-cannabinoid ekwakhiweni okusekwe emanzini. Ama-cannabinoids awancibilikisi emanzini, kodwa akhombisa ukungcola okuhle kumasolar angahlanganisi njengamafutha namafutha. Kudinga inqubo efanelekile yokuncishiswa ukunqoba ukungafinyeleleki kwama-cannabinoids emanzini. Ukuqina kwe-ultrasonic cavity kuyaziwa kakhulu futhi kusungulwe kahle inqubo yokukhiqiza ama-emulsions osayizi abahle, ozinzile (o / w, w / o, w / o / w, o / w / o, micro- kanye nanoemulsions).
Amafutha: Amafutha emifino anjengamafutha omnqumo, uwoyela kakhukhunathi noma uwoyela we-MCT asiza ukufakwa kwezinto ezingasebenzi ze-cannabis ohlelweni lokugaya ukudla. AmaCannabinoids anjenge-CBD ne-THC awakwazi ukudonswa ngaphandle kwamafutha noma amafutha. Ukuthola ukufakwa okuphelele, ama-cannabis akhipha i-uwox afakwa kakhulu ku-oyili abese esetshenziselwa enye i-emulsion.
Emulsifier: I-Lecithin, etholakala nge-powder, granules kanye nefomu le-liquid, yi-emulsifier, elungele ukudla nemikhiqizo yezokwelapha. Ama-emulsions kawoyela we-cannabis, i-lecithin ingenye ye-emulsifiers ejwayelekile. Amanye ama-emulsifiers, anikeza imiphumela emihle ama-gum arabic noma ama-emulsifiers asekwe ngesitashi.
Indlela Yokulungisa Ukumiswa Kwe-Cannabis nge-Sonication
Ukuze ulungiselele ama-nano-emulsions e-CBD aqinile, ukuxuba kwe-Polysorbate 80 no-Lecithin kusebenza kahle kakhulu. Asikho isidingo sokuthenga ama-pre-mix mix overpriced njengoba izithako zombili ziyatholakala kalula ebangeni lokudla.
I-polysorbate engu-80: eyaziwa nangokuthi i-Alkest TW 80, Scattics, Canarcel, Poegasorb 80, Montanox 80, phakathi kwe-80
Lecitin: U-Lipoid ungumkhiqizi we-lecithin osezingeni eliphakeme.
Okwe-2wt% CDB nanoemulsion (i-oyile emanzini) sebenzisa: 2wt% CBD uwoyela, 2wt% Polysorbate 80, 1wt% Lecithin, 95wt% amanzi
Kusetshenziswe yi-5wt% CDB nanoemulsion (uwoyela emanzini) ukusetshenziswa: 5wt% CBD uwoyela, 3.3wt% Polysorbate 80, 1.7wt% Lecithin, 90wt% water
Imfuneko ye-ultrasonic energy: approx. 300 kuya ku-400Ws / g yamandla we-sonication kuma-amplitudes angama-40 kuya ku-70 micron.
Igxathu emvakwe gxathu:
Ukuhlanganiswa Kwamafutha: Ukulungiselela, i-prox approx. I-10mL kawoyela we-hashi (isib. BHO) ene-40mL kawoyela wama-olive!
I-oli-in-water-Nanoemulsion: Ukuze ulungiselele i-emulsion kawoyela we-cannabis, thatha i-beaker nge-approx. I-100mL yamanzi. Njenge-emulsifier, engeza i-approx. I-10-15 amagremu we-soy lecithin. Amanzi kufanele abe nokushisa kwegumbi. Beka i-beaker yamanzi kubhavu wamanzi ukuze ulawule amazinga okushisa ngesikhathi sonication. Gxilisa i-sonotrode ye-UP400St ku-beaker ngamanzi. Ukuze uthole i-sonication, isethwe ku-50% amplitude. Khipha kancane kancane uthele i-hash oyili / i-oyili yomxube we-oyili ku-100mL wamanzi wegumbi lokushisa ngenkathi uhambisa amanzi ukwenza i-nanoemulsion. Ukuze uthuthukise i-emulsion engcono, engeza i-premix yamafutha emanzini kwesokudla ngaphansi kwe-sonotrode usebenzisa i-eyedropper noma isirinji.
Ukuze kusetshenziswe izilinganiso ezinkudlwana ezinkulu sebenzisa i-Hielscher InsertMPC48 ukufaka uwoyela we-CBD ngqo endaweni ye-cavitational ngaphansi kwe-sonotrode ye-ultrasonic.
Ingabe ufuna usizo lokuthola i-emulsifier / isofthiwe esisebenza kahle kakhulu kumkhiqizo wakho wamafutha we-cannabis? Thola uxhumano noDktRich, umcebisi okhethekile kuma-emulsifiers we-nanoemulsions eqinile ye-CBD! Landa ulwazi oluthe xaxa lapha!
I-Ultrasonic cavitation iyindlela ephumelela kakhulu ye-emulsification yokulungiselela ama-emulsions aphakeme kunhlu lwe-nano. I-sonication ye-emulsions ene-turbidities (i-micro-emulsions, i-approx. I-150 kuye ku-100nm) ibenza babe nokudlula noma kucace futhi kube sobala, ngoba kunciphisa usayizi wamaconsi we-CBD ukwehlisa amaconsi kuhla lwe-approx. I-10nm. Lokhu kwandisa ukuqina kwe-emulsion kakhulu. Ama-emulsions akhiqizwa nge-ultrasonic avame ukuzimela ngaphandle kokufaka i-emulsifier noma i-survivant.
Kawoyela we-cannabis, i-nano emulsation ithuthukisa ukumunca okwenziwe nge-cannabinoids (bioavailability) futhi iveze umthelela omkhulu kakhulu. Ngakho-ke imithamo yomkhiqizo ophansi we-cannabis ingakunika imiphumela efanayo.
Iprosesa processor ye-UP400St yama-emulsions we-CBD we-CBD.
I-cannabis i-emulsion yamafutha
I-Liposomal Emulsions ye-CBD
I-Ultrasonization yindlela esetshenzisiwe yokukhiqiza i-liposomal CDB noma i-liposomal THC njenge-vesicles yezemithi neyokuhlobisa. AmaLiposomes angamachaphaza asuselwa ku-lipid wezakhi zezidakamizwa ezisebenzayo, ezithuthukisa ukusebenza kwe-bioavailability kanye nemiphumela yokwelapha yezinto ezisebenzayo njenge-CBD noma i-THC. Njengoba ama-cannabinoids angama-molecule obucayi ngempela, athambekele ekuwohlokeni yi-oxidization kanye nokuwohloka yi-enzyme ehlukile. I-Nano-encapsulation ye-CBD noma i-THC kuma-liposomes, ivimbela ukonakaliswa kwama-cannabinoids. I-Sonication ingakwazi ukugoqa ngempumelelo ama-cannabinoids kuma-liposomes.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-liposomal encapsulation yezinto ezisebenzayo!
I-THC / CBD Nanoemulsion Stability
Ukuze ukhiqize i-nanoemulsions yesikhathi eside ye-oyili-amanzi (o / w), kuyadingeka ukusebenzisa i-surapyant efanelekile noma ukwakha ama-liposomes ahlanganisa amakhompiyutha e-lipophilic bioactive. Kawoyela we-cannabis, uwoyela ophethe kufanele abe nekhwalithi yokudla futhi akufanele aphazamise ukubukeka, ukunambitheka noma ukuqina komkhiqizo wokugcina. Amafutha kakhukhunathi (i-MCT) kanye namafutha omnqumo kungamafutha okuthwala ama-cannabinoids. Amafutha enkampani yokuthwala ayisici esibaluleke kakhulu sokwenza i-emulsion ezinzile ye-physicochemically ngoba ingasiza ukuvikela i-emulsion yokuqhuma kwe-Ostwald. Ukuvuthwa kwe-Ostwald kungamandla okushayela onisa i-emulsion ngokwenziwa ngamaconsi. I-chain chain triglyceride nanoemulsions izinzile isikhathi eside ngokumelene nokuvuthwa kwe-Ostwald. Amafutha omnqumo kanye nowoyela kakhukhunathi aqukethe ama-triglycerides amade, ukuze omabili, uwoyela womnqumo now kakhukhunathi angamafutha othwali afanele ku-THC noma e-CBD.
Izinsiza ze-Ultrasonic zeNanoemulsization
I-Hielscher Ultrasonics ingumhlinzeki oholayo wezinhlelo ezinamandla nezethembekile ze-Ultrason. Ifaka uhla oluphelele kusuka kumadivayisi welebhu namabhentshi aphezulu ukuya kwimishini ephelele yezimboni yokuqhutshwa kwamanani amakhulu ngaphansi kwezimo ezifuna kakhulu Izicelo ezijwayelekile noma imishini ye-Hielscher ultrasonic ifaka i-emulsation, homogenization kanye nokukhishwa kokudla neziphuzo kanye nomkhakha wezemithi noma wezimonyo.
I-Emulsion Batch Volume
I-Emulsion Flow Rate
Isizinda se-Ultrasonic siyaziwa kahle futhi inqubo eyisikhathi eside esungulwe ukuze kukhishwe amakhemikhali abalulekile kusuka ku-botanicals. Ngakho-ke, i-sonification iyindlela enhle yokukhiqiza amafutha e-CBD aphezulu. Nge-cavitation e-ultrasonic elawulwa ngokucophelela, amangqamuzana okutshala ahlanjululwa futhi i-solvent iphoqelelwa ngaphakathi esitokisini, lapho ithatha khona izinhlanganisela ze-intracellular ezifana ne-cannabinoids, i-terpenes, i-flavonoids njll.
Funda kabanzi mayelana ukukhipha ku-cannabis!
I-THC kanye ne-CBD Nanoemulsions
Ama-Nanoemulsions ayaziwa nangokuthi yi-miniemulsion noma i-submicron emulsion. Ama-nanoemulsions yi-emulsions enosayizi wamaconsi phakathi kuka-20 no-500nm. I-nanoemulsion uhlelo lwe-isotropic oluzinze ngokushisayo, oluqukethe iziphuzo ezimbili ezingenakuqhathaniswa (isib. I-oyili namanzi). Obunye boketshezi obungaqediwe buhlakazeka buhlakazeke kahle kusigaba sesibili ukuze bakhe isigaba esisodwa. Ukwengezwa kwama-emulsifiers, isb. Ama-survivants kanye nama-co-survivants kuzinzisa i-emulsions ngokuvimbela i-cosalescence yamaconsi. Usayizi nokwakheka kwezinhlayiya / amaconsi asakazeke esigabeni esiqhubekayo kuchaza umehluko omkhulu phakathi kwe-emulsion ne-nanoemulsion. Ukuvuthwa kwe-Ostwald kuyindlela enkulu yokuphelisa amandla ku-THC noma ku-CBD nanoemulsions. Ukuvuthwa kwe-Ostwald inqubo yokucekelwa phansi, okusho ukuthi isakhiwo esinehomogenible njenge-emulsion siyashintsha ngokuhamba kwesikhathi. Amaconsi emulsion akhula ngokuhamba kwesikhathi njengoba amaconsi amancane ancibilika futhi abeka kabusha impahla yawo kumaconsi amakhulu. Uhlobo lwamafutha lunomthelela omkhulu ekujuleni nasezingeni lesilinganiso sokuvuthwa kwe-Ostwald. Lokhu kusho ukuthi ukukhethwa kawoyela ofanele kungathinta kakhulu ukuqina kwe-emulsion. Ama-Nanoemulsions akhombisa ukulethwa okuthuthukile kwezithako ezisebenzayo (isib. Izidakamizwa).
Mayelana ne-Butane Hash Oil (BHO)
Amafutha we-Hash akhiqizwa ngokususa kwe-solvent, isib isizinda se-ultrasonic noma isizinda se-supercritical C02 esisizwayo. Ekhiqizweni kawoyela we-hashi, kungcono kusetshenziswe isitshalo se-decarboxylated. Lezi ketshezi ezilandelayo zivame ukusetshenziswa njengezixazululo ze-hash khipha i-hash khipha i-hash: i-ethanol, chloroform, dichloromethane, petroleum ether, naphtha, benzene, butane, methanol, isopropanol, ne-olive olive. Izinyibilikisi ezingeyona i-polar ezifana ne-benzene, chloroform ne-petroleum ether, azikwazi ukukhipha izindawo ezinomfutho we-insangu noma i-hashish. Lokhu kusiza ukuthola uwoyela onamandla we-hashi. Ukukhishwa kwe-cannabis extracts nge-solar engeyona i-polar kukhiqiza umkhiqizo onambitheka kangcono kunesithako esine-solar polar. Ukugezwa kokukhishwa nge-alkali kungathuthukisa iphunga nokunambitha kawoyela we-hashi.
Gcina uwoyela we-hashi esitsheni esinomoya futhi uwavikele ekuvezelweni ukukhanya. Ukuvezwa komoya, imfudumalo nokukhanya, kubangela ukuthi uwoyela uphelelwe ukunambitheka kanye nengqondo ngenxa yokuguga. Ama-antioxidants angeziwe ekwakhiweni kwamafutha e-hashi anganciphisa lo mphumela ongemuhle.
Kunezinhlobo okungenani ezingama-113 izinhlobo ezichongiweyo zama-cannabinoids ku-cannabis. Ama-cannabinoids ayizinto ezisebenzayo ze-phytochemical ezinemiphumela ye-psychoactive kanye / noma yezokwelapha. I-THC noma i-tetrahydrocannabinol iyisakhi esiyisisekelo se-psychoactive ku-cannabis. I-CBD noma i-cannabidiol ngesinye isithako esibalulekile ngemiphumela yokwelapha. Ama-cannabinoids angamakhompiyutha e-lipophilic futhi angasebenza i-acid-labile. Ama-cannabinoids awaphelelwanga emanzini, kepha ancibilikiswa kakhulu kuma-sol solar angenamakhaza (isib. Amafutha namafutha). Ukuze uthuthukise ukugaya ama-cannabinoids, hlanganisa okukhishwa kwe-cannabis ku-oyili ophethe.